Waaxda Caafimaadka Nebraska waxay soo warinaysaa in noocyada kala duwan ee COVID-19 ee ka socda Boqo | KWIT
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa sideed kale oo Iowans ah inay u dhinteen dhibaatooyinka COVID-19, iyadoo ku dhowaad 200 natiijooyin baaritaan oo dheeri ah oo ay la socdaan 16 kiisas cusub maanta lagu qabtay Gobolka Woodbury. Waxaa jiray 216 dhimashooyin ka dhacay Degmada Woodbury, iyadoo mid kalena la soo sheegay Sabtidii.
Saraakiisha ka socota Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegaya in tirada kiisaska ay sii kordhayaan qof walbana looga baahan yahay inuu ka qayb qaato kaalintiisa: waji qariya, masaafadaada iska ilaali, gacmaha iska maydh, guriga la joogo marka aad jiran tahay, iyo in laga fogaado shirarka aan muhiimka ahayn.
Dhanka kale, tirada isbitaalada ayaa ku kordhay 20% ilaa Jimcihii iyadoo 20 bukaan ah ay kujiraan Sioux City labada xarumood caafimaad.
The Orange City Tulip Festival ayaa dhici doonta bishaan Maajo. Taasi waa sida lagu daabacay baraha bulshada. Dhacdadii sanadkii hore waxaa loo joojiyay Faafida COVID-19. Dhacdada sanadkan ee loo qorsheeyay 13-ka May inkasta oo 15-ka ay ku jiri doonaan tilmaamaha badbaadada iyo hab maamuuska nadaafadda.